हतियार कहाँबाट आयो म सोध्धिन ? वार्तामा आए विप्लवलाई ठूलो सम्मान गर्छु-प्रधानमन्त्री - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
हतियार कहाँबाट आयो म सोध्धिन ? वार्तामा आए विप्लवलाई ठूलो सम्मान गर्छु-प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबन्धित विप्लब नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीलाई वार्तामा आउन सार्वजनिक आह्वान गरेका छन् । लगानी सम्मेलनभन्दा पहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग निकै कडारुपमा प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री ओली अहिले केही नरम देखिएका छन् । आइतवार गृहजिल्ला पुगेर उनले विप्लवलाई वार्तामा आउन आग्रह गरे ।
‘हतियार कहाँबाट आयो म सोध्धिन ? वार्तामा आए विप्लवलाई ठूलो सम्मान गर्छु’, आइतवार गृहजिल्ला पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले फकाउँदै र तर्साउँदै भने ‘नागरिकमा आतंक फैलाउने कामलाई भने म छुट दिन सक्दिँन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि विप्लव नेकपा पार्टी नभई समूह भएको बताउँदै आएका थिए । उनले निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको दललाई राजनीतिक शक्ति भन्न नसकिने बताउँदै आएका थिए । तर आइतवार उनले वार्तामा आए राजनीतिक शक्ति मान्न सकिने बताए ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लव नेतृत्वका नेता कार्यकर्ताहरु धमाधम भूमिगत भइरहेका छन् भने एक हजार नेता कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन् । प्रभावशाली नेता हेमन्तप्रकाश ओलीदेखि पूर्व सेनाका केही ब्यक्तिहरु पक्राउ परिसकेका छन् । तर विप्लवलाई पक्राउ गर्ने सरकारको लक्ष्य भने पुरा हुन सकेको छैन । विप्लवलाई पक्राउ नगरेसम्म प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको लक्ष्य पुरा हुने देखिदैन ।